Muxuu Kusoo Dhamaaday Kulankii Kooxaha Heegan VS Green Eagles %
Muxuu Kusoo Dhamaaday Kulankii Kooxaha Heegan VS Green Eagles
By Badrudiin Mohamed	 On Jul 7, 2019
kooxda kubbadda cagta Heegan oo sanadkan ka qeybgalaysa tartanka kooxaha bariga iyo bartamaha Afrika 2019 ee (Cecafa Kigame Club) waxayna kulankoodii 1aad la ciyaareen wiilasha Green Eagles oo iyagana ka socota dalka Zambia.
Qeybta 1aad dheeshan labada dhinac ayaa sameeyay fursado badan oo gool ah,balse waxaa lagu kala maray 1-0 oo ay hogaanka ku hayaan xidigaha Green Eagles ee Zambia.
Markii leysku soo laabtay dheesha kooxda Heegan ayaa samaysay fursado badan oo gool waxaana markale wiilasha Heegan laga dhaliyay gool kale waxayna ciyaarta kusoo dhamaatay 2-0 oo ay guusha ku qaateen xidigaha ka dhisan wadanka Zambia ee Green Eagles.
“Guul darada waa qeyb ka mid ah ciyaarta,raali gelin ayaan ka bixinayaan natiijada kulanka kasoo baxday waxaana diirada saaraynaa in aan taageerayaasheen usoo hooyno guul lagu farxo kulamada kale ee inagu soo wajahan” waxaa sidaas Qalinle Sports ugu waramay kabtanka kooxda Heegan Sports Club Omar Haghi Baanow Sheikh.
Kulamada U Haray Kooxda Heegan Ee Cecafa
08-July 2019-Heegan VS Proline-(Uganda)
11-July 2019-Heegan VS Apr-(Rwanda)
Kadib markii Messi xalay garoonka laga saaray, waa kuwee LIXDA ciyaaryahan ee aan kaarka cas loo taagin xirfaddooda ciyaareed?
Xulka Brazil Oo Ku Guuleystay Cope America Mudo 12 Sano